Skin yokungezwani komzimba: iyini ingozi yesifo?
Ezimweni nolaka kwemvelo lo mkhuba isikhumba njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, kuvamile. Okokuqala, kubalulekile ukucacisa ukuthi uhlobo isikhumba ukuphendula ukuxhumana nge allergen ezingaba, okuyinto elibhekene nezinye ukucasulwa ubala futhi hypersensitivity. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka iguliswa ngokuvamile sitholwa njengefa, kodwa kungabuye yashubisa kulesimo sanyalo nasendleleni yabo yokuphila. Abantu abanemizimba anomalies enjalo, ngokuvamile ungakwazi azizwani iguliswa Amagciwane eziningana ezahlukene, kodwa musa ukuyiziba ebanzi ukuqubuka kwesikhumba, okuyinto ngokungabi bikho esifanele ukwelashwa ngezikhathi ezithile kungase dermatitis, okuyinto yena, has a imvelo chronic relapsing.
Okokuqala sidinga ukuqonda ukuthi kungani kukhona yokungezwani komzimba isikhumba? Isizathu esikhulu sifo ecasulayo nolaka nabo lapho kukhona ukusabela isici esikhumbeni, ngamanye amazwi, kukhona omzimba ephendula ukuxhumana nomzimba elimazayo. Amasosha omzimba e esimweni esejwayelekile udlala indima isithiyo ezithile evikela umzimba kusuka kwakuwukuhlasela pathogenic lamagciwane, kodwa ukusabela iguliswa ukukopela ukumelana izivikeli mzimba. Kodwa ngisho lapha kukhona caveat: acute isikhumba yokungezwani komzimba ngemva oxhumana yesibili yalolu ketshezi.
Visual mkhuba isikhumba komzimba, izimpawu ukuthi kungatholakala ngaphandle uphethwe enemininingwane, umane kwenziwe ukuhlolwa okubonakalayo esikhunjeni sabo siqu. Allergy Ngokuvamile ubonakaliswa isimo sengqondo kuphela ngosuku lwesithathu ngemva ukuthintana ngqo allergen sivezwe futhi ukuqubuka kwesikhumba, ephelezelwa ukulunywa, ukuvuvukala, ububomvu nokuvuvukala. Ngo zingase zimiswe lubucayi kakhudlwana isithombe emtholampilo Bubbles ezimhlophe zithambekele ziyaqhuma ukudala umphumela isikhwehlela.
Ngaphambi kokuqhubeka ukwelashwa elikhiqizayo, kubalulekile ukukhomba allergen kweqiniso emzimbeni. Kukhona ezinye ngezigaba ezivamile ezishukumisa enjalo, ngenxa uhlobo okuyinto vele kungenzeka ngaso kute amemetele futsi lesi sifo isikhumba njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, impatho kungafaneleka. Ngenxa allergen eqinile ngokuvamile izenzo impova, ukudla okuvela isitshalo, abanye inflorescences, latex iraba, izingxenye ezithile amakha kanye izimonyo kanye ukulunywa yizinambuzane, nezivimbelakuvunda, ukuthaka imithi ngendlela kanye nezinsimbi.
Ezimweni eziningi, komzimba uyazi ukuthi aphendvule isikhumba sakhe, kodwa uma lolo lwazi ayivezi kuze kube sekupheleni, kubalulekile ukuba sicele imibono ukuze wesikhumba, abangagcini nje ukuze uthole ukuthi iqondeni allergen pathogenic, kodwa futhi linqume ukwelashwa okuphumelelayo.
Lapho i allergen uchazwa, kubalulekile ukuba uqhubekele ikhambi ngokushesha, futhi ngenxa yalokhu, okokuqala, kudingeka indiva isici kuyacasula imvelo yabo nokuphila kwansuku zonke. Isinyathelo sesibili ekululameni ukukhethwa lokuveza yizidakamizwa ukwelashwa olunzulu futhi olunzulu. Lokhu kungaba absorbents kwezokuphatha temlomo, kanye izinhlobo eziningi zezidakamizwa, njalo ngokwemvelo hormone, ukusetshenziswa yangaphandle. Kuyinto uyelulekwa ukuthatha Vitamin izakhiwo lokuqinisa izivikeli mzimba ukuze ugweme umuntu uyahluleka uma elwa engadingeki yansukuzonke.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi isikhumba yokungezwani komzimba ungongapheliyo futhi ngokuvamile kuba emzimbeni esimweni banyamalala kwaze kukhona athinte Ukuphinda okwalandela. Noma kunjalo, kudingeka kufanele asabele kanjani kulokhu inkinga ethile enzima, ngakho asikho ukuphulukisa phezu wezifo sino ezingaba kakhulu buthaka lo jikelele isimo sempilo.
Indlela ukwelapha isibindi ekhaya? Ingabe ikhona isibindi ikhambi ngokuphelele?
Dystonia vegetative: ukwelashwa - esingcono kunazo zonke zokutakula!
Ikhanda elivamile nesicanucanu - ukuthi isifo?
Pneumothorax wamaphaphu: izimbangela, izimpawu kanye nosizo lokuqala
Isisu ubuhlungu. Kolwelwesi: izimpawu, izimpawu kanye Izindlela zokwelapha
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini ezinganeni: ukwelashwa ekhaya. Inhalation wengane ekhaya
Inja uMalusi - okungcono umsizi wezinkomo
Herobrin benza kanjani? Indlela ukubiza Herobrin
"Ginekohel": ukubuyekezwa, intengo, izincomo ukusetshenziswa
I wesinye kwabesilisa. izinkinga ezingase zibe khona
Syech Savage - Abalandeli nobusika
Uhlu Izikhonzi Russian Federation ngokuhambisana noMthethosisekelo Russian
Izindikimba Khuphula ubuso
Yikuphi Zodiac itshe ngemvume Gemini kufanele njalo baphathe nawe?
Ihhotela "Summer", Tuapse: Uhlolojikelele, incazelo, inombolo kanye nokubuyekeza
Zabesilisa perfume toilette "Oriflame": incazelo, flavour kanye nokubuyekeza